မြန်မာမွတ်စလင်မ်များနှင့်ရိုဟင်ဂျာများနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံး ချုပ်နှင့်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးရှေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ ~ Rohingya Blogger
မြန်မာမွတ်စလင်မ်များနှင့်ရိုဟင်ဂျာများနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံး ချုပ်နှင့်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးရှေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်လျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံဖွားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၂၀၀ကျော်စည်းလုံးညီ ညွတ်စွာဖြင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဥပဒေမဲ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောဘာသာရေးအဓိကရုန်းတွင်သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများနစ်နာဆုံးရှုံးသူများအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ်ကိုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံး ချုပ်နှင့်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးရှေ့တွင်ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်ကြသောမြန်မာနိုင်ငံဖွားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် မိမိတို့၏မွေးရာပါလူမျိုး၊နေထိုင်ခဲ့ရာဒေသများကိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲစည်းလုံးညီညွတ်မှု့ကိုအခြေခံ၍လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောရခိုင် ပြည်နယ်အဓိကရုန်း၏ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုကမ္ဘာမှသိစေရန်ရည်ရွယ်ရုံမကတရားမျှတသောဥပဒေဖြင့်ဆုံးဖြတ်မှုပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ CNN သတင်းဌာနမှလာရောက်၍ ဆန္ဒပြပွဲကိုမှတ်တမ်းတင်သည့် အပြင် ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူအချို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအမှန်ကိုမေးမြန်းသွားသည်။ ဆန္ဒပြသူများမှာနိုင်ငံတကာမီဒီယာများမှပြည်တွင်းမီဒီယာများ၏တဖက်သတ်လုပ်ကြံထားသောသတင်းများကိုသာရရှိနေသည်ကိုအထူးပြု၍ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းသို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာများဝင်ရောက်ခွင့်မရသောကြောင့် ယခုအခါ တမင်ရည်ရွယ်၍လုပ်နေသော ဤအဓိကရုန်းသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာမှနေထိုင်လျက်ရှိသောရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကိုလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်၍နိုင်ငံတွင်းမှကုန်သည်အထိပြုလုပ်သွားမည်ကိုအထူးစိုးရိမ်နေကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဘန်းကီမွန်းနှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့စာများကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ထိုစာများတွင်
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားမျှတသောဥပေဒေဖြင့် လက်ရှိဖြစ် ပေါ်နေသောအကြမ်းဖက်မှုများကိုကာကွယ်ရေး၊ နစ်နာဆုံးရှုံးသူများကိုတရားဥပဒေဖြင့်တရားမျှတသောအဆုံးအဖြတ်များ ရရှိရေး၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ဆုံးရှုံးသွားသောနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများပြန်လည်ရရှိရေး၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လူမျိုး ရေးမုန်းတီးမှုများ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှုများကိုတားဆီးပေးရေး၊ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်အဖြစ်ပြုလုပ်နေသောအဓိကရုန်းများရပ်တန့်ပေးရေးနှင့်အဓိကရုန်းဒဏ်ကြောင့်နစ်နာဆုံးရှုံးသူများကိုအစားအစာ၊ဆေးဝါးနှင့်နေထိုင်ရန်အစီအစဉ်များအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပေးရေးတို့ကိုအဓိကတောင်းဆိုရေးသားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံပြင်ပသို့ရောက်ရှိသွားသော ဒုက္ခသည်များကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်၊ ဘာသာရေးတားမြစ်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်၊ ဖျက်ဆီးသွားသောဗလီများပြန်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးရန်၊ရွာများပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ပေးရန်တို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ Newer Post
PLEASE HELP THE TWO MEN TO APPEAL AGAINST THE DEATH SENTENCE21 June 2012 03:41Rakhine State, western Burma - Two death row inmates transferred toaprison in the state's capitalJune 20, 2012Mahmoud Rauhi and Kochi, the death-row inmates of Kyaukpyu prison in Rakhine State, western Burma, were transferred to Sittwe (formerly Akyab) prison in the state's capital today.Their transfer to Sittwe prison is attributable to the fact that there is no death row in Kyaukpyu prison, according toalocal man who learned this from prison officials.Three Rohingya Muslims - Mahmoud Rauhi (18), Kochi (21) and Htet Htet (Rasheed) (23) - were arrested for the murder ofaRakhine Buddhist woman Ma Thidar Htwe of Thapraychaung Village, Ramree Towship, Rakhine State in Myanmar, whose killing last month helped set off communal violence in which nearly 60 people died, according to the state media.The three Muslims of the Rohingya minority were charged under Burmese Penal Code section 376 for rape, section 302 (1c) for murder and section 392 for looting properties. Htet Htet alias Rasheed committed suicide in his cell at Kyaukpyu prison.Mahmoud Rauhi and Kochi were sentenced to death under Penal Code section 302-1 (C). The verdict was handed down on the 18th of June in Rakhine State’s Kyaukphyu district, according to the state-run Myanma Ahlin daily.The two death-row inmates have the right to appeal against their death sentence toacourt of higher jurisdiction within7days of the sentence. In the absence of an appeal against their death penalty, the two will be awaiting their execution at Sittwe prison.Mahmoud Rauhi and Kochi, the death-row inmates of Kyaukpyu prison in Rakhine State, were transferred to Sittwe (formerly Akyab) prison in the state's capital today.Their transfer to Sittwe prison is attributable to the fact that there is no death row in Kyaukpyu prison, according toalocal man who learned this from prison officials.Three Rohingya Muslims - Mahmoud Rauhi (18), Kochi (21) and Htet Htet (Rasheed) (23) - were arrested for the murder ofaRakhine Buddhist woman Ma Thidar Htwe of Thapraychaung Village, Ramree Towship, Rakhine State in Myanmar, whose killing last month helped set off communal violence in which nearly 60 people died, according to the state media.The three Muslims of the Rohingya minority were charged under Burmese Penal Code section 376 for rape, section 302 (1c) for murder and section 392 for looting properties. Htet Htet alias Rasheed committed suicide in his cell at Kyaukpyu prison.Mahmoud Rauhi and Kochi were sentenced to death under Penal Code section 302-1 (C). The verdict was handed down on the 18th of June in Rakhine State’s Kyaukphyu district, according to the state-run Myanma Ahlin daily.The two death-row inmates have the right to appeal against their death sentence toacourt of higher jurisdiction within7days of the sentence. In the absence of an appeal against their death penalty, the two will be awaiting their execution at Sittwe prison.ReplyDeleteAdd commentLoad more...